Iindaba - Ingqungquthela yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi kunye neZiko leMiboniso.
Ingqungquthela yeHlabathi yeHlabathi yeZiko leMiboniso.
Ngomhla kaNovemba 28,2020, i-13th yeZhongshan Nwabisa Fair China ibibanjelwe e-Zhongshan Expo Centre / kwiNdibano yeHlabathi yeHlabathi kunye neZiko leMiboniso.
Ngomhla kaNovemba 28,2020, umdlalo we-13 weZhongshan International kunye noMnyhadala weTshayina (iZhongshan) iNkcubeko yeHlabathi yeNkcubeko kunye nezoKhenketho yabanjwa eZhongshan Expo Centre / kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo yeHlabathi kunye neZiko leMiboniso. Lo mboniso uqhubeka kangangeentsuku ezi-3, unomxholo othi "ukuvuselela inkcubeko nokhenketho, ukubumba ikamva ngokutsha".
Inkampani yethu ithathe inxaxheba kulo mboniso kwaye yafumana okuninzi!
Lo mboniso ubandakanya indawo iyonke engama-60000 eemitha zesikwere, kwaye phantse amashishini angama-500 olonwabo, ukhenketho lwenkcubeko kunye nezixhobo zemimandla ebonakalayo bathathe inxaxheba kulo mboniso, kubandakanya izibonelelo kunye nezixhobo zePaki yangaphakathi, ipaki yomxholo kunye nepaki yamanzi, ukucwangcisa, uyilo, ulwakhiwo, ukupakisha umxholo / Ukuma komhlaba; ukhenketho lobukrelekrele, itekhnoloji yokhenketho lwenkcubeko, indawo yokuhlala yenkcubeko kunye neyokhenketho, ukhenketho lobugcisa ebusuku, izixhobo ezibukekayo kunye neendawo ezintle zenkonzo zorhwebo; iholo lezemidlalo lomkhenkce, iziko lokonwaba kusapho, imyuziyam, inzululwazi kunye neMbali yoBugcisa, imiboniso bhanyabhanya kunye nezinye iindawo zokuzonwabisa zemultimedia zobugcisa obuphezulu kunye neemveliso zeVR / AR; inkcubeko kunye nokuyila iimveliso zabathengi · oopopayi be-IP kunye neemveliso ezivela kubuhle kunye nentengiso yorhwebo; utyalo-mali lweprojekthi yenkcubeko nezokhenketho, uphuhliso, ucwangciso, ukusebenza, ulawulo nokwazisa iprojekthi. Umboniso ubandakanya wonke umzi mveliso wokuzonwabisa, inkcubeko kunye nokhenketho, ugxile kwimidlalo yamva nje yehlabathi kunye neemveliso zokuzonwabisa kunye nenkcubeko yezoKhenketho ivelisa iimveliso kunye nobuchwephesha kwezobuchwephesha kumzi-mveliso, kwaye ijolise kwimpumelelo yophuhliso lwamva nje lomdlalo wase China kunye noshishino lokuzonwabisa kunye nenkcubeko icandelo lokhenketho.
Ngexesha lokuvuselelwa kwe-covid-19, umdlalo we-13 we-Zhongshan International kunye ne-Amusement Fair China (Zhongshan) iNkcubeko yeHlabathi yeNkcubeko kunye nezoKhenketho ihambelana nemeko yophuhliso lwala maxesha, ijolise ekukhuthazeni ukudityaniswa kwemizi-mveliso, ithathe amanyathelo ahlukeneyo okuphakamisa ukunyuka kwenkcubeko kunye nokubuyiswa kwezokhenketho, kubonelela ngeemveliso ezikhethiweyo zamva kwiipaki kunye neendawo ezinomtsalane, kwaye kunceda amaqela athatha inxaxheba ukuba abonise amandla awo omlingo kolu papasho kunye neqonga lemiboniso, ngokudibeneyo ukwenza indlela yophuhliso lwamva lwezokhenketho lwenkcubeko, kunye negalelo ekukhuthazeni ezasekhaya